Le yindlela i-Apple evikele ngayo izimfihlo zesoftware yayo le WWDC 2021 | Izindaba ze-IPhone
Le yindlela i-Apple evikele ngayo izimfihlo zesoftware yayo le WWDC 2021
U-Angel Gonzalez | | Izaziso, I-WWDC 2021
Ukuvuza okukhulu komkhiqizo futhi isoftware ye-apula bangomunye wamaphuzu abuthakathaka enkampani. Akuyona i-Apple kuphela eyinkinga kepha kuzo zonke izinkampani ezinemikhiqizo yazo ngaphansi kwezimfihlo eziphakeme ukugwema ukuvuza kwazo zonke izinhlobo. Uhlobo olugcwele lwe-iOS 14 oludalulwe ngonyaka odlule olwembule izici ezinhle futhi lwagcina lwembulwa eWWDC. Noma kunjalo, Kulo nyaka kwa-WWDC 2021 sifike sinolwazi oluncane futhi sithuthuke kancane kakhulu ngezindaba ze-iOS ne-iPadOS 15. Lokhu kungabangelwa uhlelo olusha olusetshenziswa yi-Apple ukunqanda ukuboniswa kwezindaba ngamaphrofayli okufinyelela ngamanye.
Le yindlela i-Apple evikele ngayo i-iOS ne-iPadOS 15 ye-WWDC 2021
Abafana namantombazane ka I-9to5mac bahlaziye ikhodi yomthombo ye-beta yokuqala yabathuthukisi be-iOS 15 njengakuhlobo ngalunye olukhishwe yi-Apple. Kodwa-ke, bathole i-quirk abangakaze bayibone ngaphambili. I-Apple enkulu ingeze okokuhlonza okuhlukile kuzici ezintsha ku-iOS naku-iPadOS 15. Okusho ukuthi, iphakethe lesici ngasinye noma izici zomuntu ngamunye ziklanywe ku-ID efinyelelwa ngokufinyelela okunomkhawulo.
I-watchOS 8: ukusebenzisa okuningi nokubaluleka kwempilo yomuntu siqu
Ukuze ukwazi ukukhombisa leyo misebenzi ekhawulelwe kuyadingeka ube nephrofayili yomuntu ngamunye ekwazi ukuwavula. Lokho ukuthi, imisebenzi ethile ivuliwe futhi iyakhonjiswa lapho i-iOS ithola ukuthi iphrofayili esetshenzisiwe ilungile. Ngale ndlela, i-Apple ingakwazi unikeze ukufinyelela kwezinye izingxenye ze-iOS ne-iPadOS kwabanye onjiniyela ukufihla eminye imisebenzi akudingeki basebenze kuyo. Lokhu kusebenza kukodwa emisebenzini futhi kuvimbela wonke umuntu ekutholeni ukufinyelela kulo lonke uhlelo olusha lokusebenza.
Ngandlela thile, lokhu sekuvele kwenzeka emhlabeni jikelele ngezibuyekezo ezivela ku-App Store kuya ngohlobo lwe-iOS esinalo nokuthi ngabe i-Apple ithathe isinqumo sokuyibuyekeza leyo mininingwane noma cha. Noma kunjalo, umkhawulo wesici ufikile kwisoftware ukuhlala ngenhloso yokugcina izindaba zezinhlelo zabo zokusebenza ekusithekeni okuyimfihlo kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » Le yindlela i-Apple evikele ngayo izimfihlo zesoftware yayo le WWDC 2021
IChipolo One Spot, okunye okuhle kakhulu kuma-AirTags
Inselelo yomsebenzi omusha obonwayo. Gubha Usuku Lomhlaba Wonke lwe-Yoga